Masuuliyiin ka tirsan DF oo ka qayb galay munaasabad xariga looga jarayay Dugsi sare oo dhawaan laga hirgaliyay Caabudwaaq “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Masuuliyiin ka tirsan DF oo ka qayb galay munaasabad xariga looga jarayay Dugsi sare oo dhawaan laga hirgaliyay Caabudwaaq “SAWIRRO”
Munaasabad xariga looga jarayay Dugsiga sare ee degmada oo ay si wadajira uaga qayb qaaten dhismahiisa Dowladda Federaalka iyo Hay’ada USAID ayaa lagu qabtay qabtay dugsiga sare ee degmda Caabudwaaq .
Waxaa Munaasabdaasi u yimid ka qayb galkeena Degmada mas’uuliyiin kala duwan waxaana kamid ahaa madaxdii ka soo ayb gashay munaasabada Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Waxbarashada iyo tacliinta Sare ee Dowladda Federaalka Xaamud Cali Xasan iyo Guddoonka waxbarashada Gobolka Banaadir Cabdicasiis Nuur iyo Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada iyo tacliinta Sare ee Galmudug Sheekh Ibraahin Sheekh Xasan iyo Agaasimaha Wasaaradda waxbarashada Galmudug Axmed Cusmaan Cali, Maamulka degmada, iyo qaybaha kala duwan eee Bulshada.
Guddoomiyaha degmada Caabudwaaq Mahad Cumar Cilmi oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyay mas’uuliyiinta u timid ka qaybganka furitaanka dugsiga sare iyo Abaalmarinta Ardayda iskuulka Shire Jaamac oo saddex ka mid ah ay kamid noqotay 10-kii arday ee ugu sareysay imtixaankii qaran ee dalka ay ka sameysay Dawladeeda 2015/2016.
Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada Galmudug Sheekh Ibraahin Sheekh Xasan Guureeye oo munaasabadaasi hadal ka jjeediyay ayaa u sheegay iskuulka ardayda Shire Jaamac ee guusha ka gaaray imtixaankii Qaran ee laga sameeyay dalka ay abaal marin siin doonto dowlad Goboleedka Galmudug, waxaana sidoo kale uu soo hadal qaaday qorshayaasha waxqabad ee la filayo dhawaan in laga sameeyo Degmada.
Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta Sare ee Xukuumadda Faderaalka Xaamud Cali Xasan iyo wafdi la socday oo u yimid degmada Furitaanka dugsiga sare ee degmada iyo Dhiiragalinta Iskuulka Shire Jaaamac oo Sadex ka midi ah Ardaydii uga qaybgashay Imtixaanka Qaran ay ku jiraan afarta ugu sareysa ee kubaastay Imtixaankaasi, waxaana uu sheegay in ay farxad u tahay ka soo qaybgalkiisa Guushaasi.
Saddexda Arday safka hore ka gashay imtixaanka Dowladda ayaa la guddoonsiiyay min shan boqol oo doolarka Mareykanka ah oo ah lacag lagu dhiiri gelinayo, taasi oo ay iska soo urruuriyeen Jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Chicago ee Dalka Mareykanka, Urur la yiraahdo DDF iyo Guddiga garoonka diyaaradaha Caabudwaaq.
Cabdikariin Axmed Bulxan
Agaasimaha guud ee Wasaaradda Warfaafinta iyo wafdi uu hogaaminayo oo lagu soo dhaweeyay magaalada Baladweyne